Wararkii ugu Danbeeyey iyo Xaaladda Caafimaad ee Buuhoodle oo ka sii Daraysa – Radio Daljir
Wararkii ugu Danbeeyey iyo Xaaladda Caafimaad ee Buuhoodle oo ka sii Daraysa
Abriil 20, 2017 3:55 g 0
Xaalada magaalada Buuhoodle iyo guud ahaan Gobolka Cayn ayaa ka sii daraysa maalinba maalinta ka danbaysa iyada oo wali xakamo loo la’yahay joojinta xanuunkan oo dad badan galaaftay noloshooda.
Tiro dad ah oo aan wali si dhab ah loo hubin inta qof ay yihiin ayaa maanta la keenay Daryeel Hospital waxaana dadkan soo ritay xanuunka shubanka kaas oo dad badan u dhinteen.
Waa imisa Bukaan Jiifka Goobaha Caafimaad ee Gobolka Cayn?
in ka badan 350 qof ayaa jiifa goobaha Caafimaad ee Gobolka Cayn waxaana dadka ugu badan lagu dabiibayaa Daryeel Hospital, ahna dad magaalada cudurku ku haleelay iyo dadka ugu badan oo ah dadka Reer guuraaga ah iyo kuwa degmooyinka Buuhoodle hoos yimaado.
Dhimashada 24-kii Saac ee Ugu Danbaysay ee Cudurkan Gaystay
Maanta ilaa xalay inta laga war hayo dhimashadu waa 3 qof waxaana dadkaasi ku jira Shiikh si wayn deegaanka looga yaqaan, Alle ha u naxariisto.
Shalay Tirada Dadka u Dhintay Cudurka Shuban Biyoodka
Maalintii shalay waxaa dhintay dadkii ugu Badnaa ee mar kaliya u wada dhinta cudurkan shubanka waxaana dadkaasi ku jiray Alle ha u naxariistee Caaqil Cabdi Hogod oo ka mid ahaa waxgaradka Deegaanka Gobolka Cayn, waxaana dadka dhintay shalay ahaayeen 8 qof oo dad waayeel ah u badan.
Hoos u Dhac ku Yimid Cudurka Shubanka Shalay iyo Xalay
Sida muuqata hoos u dhaca ayaa ku yimid xanuunka waxaana shalay dadka jiifay gaadhayeen 500 oo qof, maantana waa 350 qof. Dhimashada shalay waxay ahayd 8 qof, maanta iyo xalay waa 3.
Shaqo Noocee ah ayaa ka Socota Daryeel Hospital Buuhoodle
Daryeel Hospitaal Buuhoodle waxaa ka soconaya shaqo ay adag tahay in qoraal lagu soo koobo waxaana shaqadaas wada haya kooxo caafimaad iyo dhalinyaro dadkooda u gurmanaya.
Dadka Deegaanka Gobolka Cayn maxaa la Gudboon in ay Sameeyaan?
Dadka deegaanka waxaa la gudboon in ay Ilaahay baryaan oo iscafiyaan oo ogaadaan in waxanni yahay imxitaan culus. Waxaa kale oo muhim ah in nadaafadda lagu dadaalo oo biyaha la karkariyo, deedna la qaboojiyo inta aan la cabbin
Qalinkii Axmed Maxamed Nadiif (Axmed Qaran)
Warka Fiidnimo iyo Maxamed Lakiman, Daljir Garoowe
Fursado iyo Jagooyin ka Bannaan Golaha Aqalka Sare (Somali Senate)